Mpanamboatra fandriana hopitaly fiasan'ny hopitaly tsara indrindra | Webian
Ity no fandriantsika hopitaly miasa telo. Izy io dia manana fihenan-tongotra sy fialan-tsasatra ary fanitsiana ny haavony. Ny tena tanjona dia ny hanamora ny fikarakarana ny marary ho an'ny mpiasa mpitsabo. Ary rehefa avelao irery ilay marary, ny mpitsabo mpanampy dia afaka manitsy ny haavon'ny fandriana ho ambany indrindra. Mba hahafahan'ny marary miditra sy mivoaka amin'ny fandriana samirery. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia mihabetsaka ny mpanjifa no aleony misafidy fandidiana herinaratra ho an'ny fandriana miisa telo. Satria mora ny miasa. Ary ny marary dia afaka miasa irery. Hampihena ny asan'ny mpiasa mpitsabo izany.
Ary ny fandriana azo ovaina ho fandriana manual. Ary ny rafitry ny frezy dia azo ovaina amin'ny rafitra fanaraha-maso afovoany. Ny fanaraha-maso afovoany dia haingana sy mora kokoa. Mazava ho azy, ny faritra hafa dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao koa.
Casters mangina 125mm misy frein,
Halavany: 2090mm (farafara fandriana 1950mm), Sakany: 960mm (farafara fandriana 900mm)
Haavony: 420mm ka hatramin'ny 680mm (farafara fandriana ka hatramin'ny gorodona, esory ny hatevin'ny kidoro),
6. Guardrails (fitaovana firaka aliminioma na fitaovana ABS)
Atsofohy ny casters ary apetaho ao anaty ny casters ny tongotra (aseho amin'ny sary 1)
Ampidiro ny lohan'ny takelaka sy ny takelaka misy ny sary 1 sary 2
ny farafara fandriana, ary mihidy amin'ny lohan-doha sy takelaka (toy ny hita eo amin'ny sary 2)
Tsindrio ny bokotra ▲, ny fiakarana ankapobeny, ny haavon'ny halavan'ny fandriana dia 680cm
Tsindrio ny bokotra ▼, ny fitetezana ankapobeny, ny haavon'ny ambany indrindra amin'ny farafara fandriana dia 420cm
Fiarovan-tena: Atsofohy ny faran'ny mpiambina ary atsangano hatrany ambony ilay arofanina.
Atolory ny faran'ny mpiambina ary avelao hidina ny mpiambina.
Teo aloha: Fandriana mpitsabo mpanampy elektrika dimy
Manaraka: Fandriana hopitaly miasa dimy
Fandriana hopitaly telo crank